Assembly PCB, PCB Imveliso, PCB Uyilo - Sichi
UKUQINISEKA KOKUQHAQHWA KWE-CHIP
I-NEC CHIP CRACK
SAMSUNG MCU VULA
I-C8051 CHIP CRACK
I-MSP430 MCU CRACK
SPMC65 SPMC75 UKUSETYENZISWA
CYPRESS / CY8C MCU ukuqhekeka
I-MASK ROM MCU CRACK
UKUQHUBEKA KWE-ARM MCU
IMITSUBISH MCU DECRYPTION
FUJITSU IC UKUQALA
IClone Clone >>
I-Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasungulwa ngo-2000. Sisebenza kwi-PCB engama-1-32 ngokukhawuleza, ukugcinwa kunye nokuphuculwa kwezixhobo zazo zonke izixhobo zonyango, izixhobo zokulawula ngokuzenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano zeselula. Singomnye wamashishini anamandla kwaye anempembelelo kunye namashishini anjengeenkonzo zokumisa enye yeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ulungelelwaniso lwePCB, ukuqhekeka kwe-IC, uyilo lwePCB, ukuqaqanjelwa kwe-IC, uyilo lwe-chip reverse, ukwenziwa kwe-SMT, ukuveliswa kwePCB, imveliso yomzekelo nokulungisa ...
Assembly PCB >>
Sinikezela ngokukhawuleza-ukujika prototype, ivolumu esezantsi kunye nemveliso ye-PCB indibano kunye nomphezulu wendlela (SMT), nge-hole-hole (THT) kunye nezinto zokudibanisa. Sinikezela ngesitshixo sokujika (thumela nje iifayile zeGerber kunye ne-BOM), umthwalo (unikezela onke amalungu) kunye nezinto ezahlukeneyo onokukhetha ukuzithenga ukukunceda ukunciphisa iindleko kunye nexesha lokulinda. Inkonzo yethu yokujika ngokukhawuleza inokuhlanganisa iibhodi zakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Singakwazi ukuphatha ubungakanani obuncinci kunye nemveliso yevolumu. Zonke iinkonzo zethu zikwixabiso elikhuphisana kakhulu kwaye sine-100% yesiqinisekiso sokwaneliseka…
Ukuvula okuqhelekileyo kwe-IC MCU
UPHILIPI MCU DECRYPTION
UKUQhekeka kwe-ISSI MCU
I-NXP CHIP YOKUGQIBELA
I-SST CHIP CRACK
IMOTOROLA CHIP VULA
I-INTEL CHIP CRACK
I-ACTEL_RTAX CHIP CRACK
DALLAS CHIP VULA
MDT IC UKUQALA
UKUQhekeka kukaSONIX MCU
UTSHINTSHO LWEKHODI YASE ST MCU
SYNCMOS MCU VULA
HOLTEK IC VULA
Abavelisi: ALTERA IC UNLOCK
TI_TMS IC UKUQALA
SILICON IC UKUQALA
FREESCALE IC VULA
IATMEL MCU QHAWULA
Ukukhutshwa kweKhowudi yeKhowudi >>
I-Shenzhen Sichi Technology Co, i-LTD ineenjineli zesoftware kunye ne-hardware ezingaphezu kwe-100 kumava atyebileyo e-chip decryption, IC Crack, ukuvula i-MCU, uhlalutyo lwe-IC / ikhowudi ye-ASM, ukutshisa i-chip kunye nokuchongwa kwemodeli, i-PCB kunye nokwenza imveliso ngobuninzi. Sinexabiso elothusayo kunye nenqanaba lempumelelo, ubuchwephesha kwizixhobo zonyango kunye nezempilo, izixhobo zolawulo kwimizi-mveliso, iibhodi zomdlalo njalo njalo. Amava atyebileyo wokuchithwa kwe-chip, umgangatho kunye nexabiso liqinisekisiwe. Sinokubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha efanelekileyo ivumela abathengi ukuba baqiniseke ukuba benza imveliso elungileyo. Sisoloko siphonononga abanye abanakufikelela kwimimandla yetekhnoloji, kwaye sihlala siphucula umgangatho weenkonzo zethu zetekhnoloji, ukunceda abantu abaninzi baqonde ubutyebi babo baphupha ngexeshana elifutshane…
Uyilo lwePCB >>
Ukuba unesikimu okanye umzobo, kodwa awunalo ixesha okanye izixhobo zokugqibezela uyilo, sinokukunceda. Kukho amanyathelo ali-11 kwinkqubo yoyilo lwe-PCB kunye nokuhamba komsebenzi esikugubungela kwisikhokelo sokuyila i-pcb. Inyathelo1: Gqibezela uyilo lweesekethe. Inyathelo2: Khetha iSoftware yoYilo lwePCB. Inyathelo3: Thatha iSikimu sakho. Inyathelo4: Uyilo lweeNxalenye zeNyathelo-Nje ukuba iskim sigqibe ixesha laso lokuzoba ulwandlalo lwento nganye. Olu luhlu lubekwe kwi-pcb ngobhedu ukuvumela ukuba izinto zithunyelwe kwibhodi ye-wiring eprintiweyo…
PCB Ukwenziwa >>
Silungile ekuchazeni iitshipsi ezinzima, iileyile ezingama-1-32 zeklone yePCB, ubeko lwePCB, iNdibano yePCB kunye nemveliso emininzi. Sijolise ekuveliseni i-PCBA ekumgangatho ophezulu, kwaye kwimveliso emininzi siza kunika izaphulelo. Zonke PCBA kufuneka unyaka omnye isiqinisekiso. Ukuba unayo enye i-PCB ngaphezulu kwe-6 maleko, njengama-8 maleko, i-10 layers, i-16 layers, i-18 layers, i-28 layers, nceda unxibelelane nathi, silungile kwikopi kwaye sisebenzisa ibhodi ye-multilayer. Sikwanekhono lokumisela i-chip enzima njengePIC16F1937, PIC16F1936, PIC16F1947, PIC24FJ64, PIC24HJ64, PIC18F25, EPM240, EPM570, EPM1270, STM, LPC, R5F, MB, NEC, MC, TMS, CY8C, AT91SAM, T91SAM, T91SAM, T91SAM,
Uhlobo lwePCB >>
Silungile ekuchazeni iitshipsi ezinzima, iileyile ezingama-1-32 zeklone yePCB, ubeko lwePCB, iNdibano yePCB kunye nemveliso emininzi. Sijolise ekuveliseni i-PCBA ekumgangatho ophezulu, kwaye kwimveliso emininzi siza kunika izaphulelo. Zonke PCBA kufuneka unyaka omnye isiqinisekiso. Ukuba unayo enye i-PCB ngaphezulu kwe-6 maleko, njengamaleko ayi-8, iileya ezili-10, iileyi ezili-16, izaleko ezili-18, izaleko ezingama-28, nceda unxibelelane nathi, silungile kwikopi kwaye sisebenzisa ibhodi ye-multilayer. Sikwanobuchule boku…
Unobuchule kwizixhobo zonyango kunye nezempilo, izixhobo zolawulo lweshishini kunye neebhodi zemidlalo.
IC Crack, MCU yokuvula, IC uhlalutyo umva / ASM Code ...
Ukuqhekeka kwe-IC kunye nekhowudi yokuqhekeka
iinkonzo zokuma kwiNdibano ye-PCB, ikopi ye-PCB, i-PCB clone, i-IC Crack, uyilo lwe-PCB, i-IC decryption, uyilo lwe-chip reverse, inkqubo ye-SMT ...
Sinexabiso elothusayo kunye nenqanaba lempumelelo. Unobuchule kwizixhobo zonyango kunye nezempilo, izixhobo zolawulo kwimizi-mveliso kunye neebhodi zemidlalo ...
Sisoloko siphonononga abanye abanakufikelela kwimimandla yetekhnoloji, kwaye sihlala siphucula umgangatho weenkonzo zethu zetekhnoloji, ukunceda abantu abaninzi baqonde ubutyebi babo baphupha ngexesha elifutshane.
Disemba-08-2020 I-PCB Khuphela ubuNjineli usebenzisa ibhodi yesekethe eprintiweyo emininzi
Disemba-07-2020 Ukuqwalaselwa kokubhalwa kwe-chip emva kokuchithwa kwe-AVR microcontroller IC
Disemba-07-2020 IC reverse kunye chip ikhowudi khipha
Nov-30-2020 I-microcontrollers eziqhelekileyo ezikhoyo, iintlobo zeetshiphusi
Nov-30-2020 Shenzhen Sichi Technology Co., LTD yasekwa ngo-2000
I-Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2000. Yeyona nkampani inamandla kwaye inefuthe kula mashishini ayo alandelayo: iinkonzo zokumisa enye zeNdibano yePCB, ikopi yePCB, ikhonkco lePCB, IC Crack, uyilo lwePCB, ukuqaqanjiswa kwe-IC, chip uyilo olubuyela umva, ukuqhubekeka kwe-SMT, ubuqhetseba be-PCB, imveliso yemodeli kunye nokulungisa ingxaki. Sinobuchule kumanqanaba angama-1-38 e-PCB ngokukhawuleza, ulondolozo kunye nophuhliso lwezincedisi zazo zonke izixhobo zonyango, kunye nezixhobo zokulawula ezizenzekelayo, kunye nezixhobo zonxibelelwano eziphathwayo.